Dani Alves Oo Hantay Koobkiisii 32aad – Kaliya Labo Xiddig Oo Ka Koobab Badan Ayaa Dunida Dusheeda Socda Maanta - Laacib.net
Dani Alves Oo Hantay Koobkiisii 32aad – Kaliya Labo Xiddig Oo Ka Koobab Badan Ayaa Dunida Dusheeda Socda Maanta
Dani Alves ayaa xalayto ku guuleystay koobkii 32aad ee waayihiisa ciyaareed. Ka dib markii uu shabaqa soo taabtay kulankii ay Juventus 2-0 kaga badisaa Lazio ee finalka Coppa Italia, daafaca midig ee reer Brazil ayaa haatan kor u soo qaaday 32 koob oo heerar kala duwan leh.
Waana rikoor koobab oo cajiib ah, waana mid weyn marka aad la barbardhigto koobabka uu Alves ku guuleystay kuwa ay hanteen ciyaartoyda kale ee maanta nool.
Coppa Italia waa koobkii ugu horeysay ee uu Alves la qaado Juventus oo uu xagaagii hore ku biiray, laakiin madaama ay tahay koobkiisii 32aad waxa ay leedahay qiimo weyn.
Marka aad eegto koobabka laga qaaday kaliya kooxaha ee aan ku jirin xulalka, Alves waxa uu barbareeyay Zlatan Ibrahimovic oo ay kuwada jiraan kaalinta seddexaad ee xiddigaha ugu koobabka badan dunida.
Isagoo u soo ciyaaray Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG iyo Manchester United, Zlatan waxa uu ku guuleystay 32koob, waana tirada uu Alves ku soo qaatay kooxaha Bahia, Sevilla, Barcelona iyo haatan Juve.
Labada nin waxa ay fursad u heystaan inay koobab kale ku darsadaan magacooda maalmaha soo socda, Zlatan waxa uu hanan karaa bilada Europa league, halka Alves uu qarka u saaran yahay koobkiisii ugu horeysay ee Serie A iyo weliba suurtogalnimada uu ku qaado koobkii afaraad ee Champions League.
Xitaa haddii ay taasi dhacdo, midkoodna ma soo qaban doono labada xiddig ee ugu koobab badan.
Halyeeyga Manchester United Ryan Giggs ayaa kaalinta labaad ku jira haatan isagoo kor u qaaday 35 koob.
Xiddiga kaalinta koowaad ku jira ayaase ah magac lama filaan ah, ma ahan Messi oo 29 koob ku guuleystay ama Iniesta oo 30 koob kor u qaaday laakiin waa Maxwell oo 36 koob soo hantay.
Daafaca bidix ee reer Brazil oo u soo ciyaaray Cruzeiro, Ajax, Inter, Barcelona iyo PSG, islamarkaana u saftay Brazil kaliya 10 kulan ayaa kor u qaaday 36 koob.